Fitanterana iombonana amin’ny alina | mandimby maharo
Fitanterana iombonana amin’ny alina
Posted on 8 October 2012 by Mandimby Maharo
Mbola olana sedrain’ny mponin’Antananarivo toy izay hita any amin’ny tanan-dehibe manera-tany ny fitanterana iombonana andrenivohitra. Na izy ireny tsy ampy na tsy mahafapo ny tolotra omeny. Miezaka mitondra vahaolana amin’izany ireo mpitantana ny Tanana amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina.
Nandefa antso ny amin’ny hametrahana zotra TaxiBe amin’ny alina ary ny kaominina Antananarivo-Renivohitra. Tetikasa izay misokatra ho an’ireo mpandraharaha manana traikefa amin’ny fitanterana olona an-drenivohitra. Izao tetikasa izao kosa nefa dia tsy natao hifaninana amin’ireo zotra mpitattra amin’ny atoandro izay efa miasa ankehitriny. Izay indrindra no iheverina fa ireto zotra ireto dia hiasa manomboka amin’ny 09 ora alina mba amahana ny olana eo amin’ny fivezivezen’ny mponina miasa alina sy tara fodiana. Hametraka lamina sy hanampy amin’ny fiarovana koa ny kaominina mba tsy hisian’ny loza hitranga eo amin’ny mpitatitra sy ny mpandeha.
Iarahana manatotosa amin’ny faritra Ile-de-France moa ozao tetikasa izao. Ary tafiditra ao anatin’ilay tetikasa lehibe fanatsarana ny fivezivezen’ny mponina. Tohin’ireo asa napetraka ho fanatsarana ny tanana karakarain’ny Institut des Métier de la Vile izao asa izao.
Tags: Antananarivo, Bus, fitanteranaCategories: societé
2 thoughts on “Fitanterana iombonana amin’ny alina”
8 October 2012 at 1503 04
Tsara aloha ilay tetik’asa, fa ho hita eo ny fanatontosana azy e!
9 October 2012 at 1111 29
oanay mpdy alina aloha mety hahatsara zavatra ihany a. fa enga fotsn anie hust zotra ho ety amn tanana